उत्तम नोट मैले कहिल्यै मेरो ब्लगमा प्राप्त गरेको छु Martech Zone
शुक्रबार, मे 18, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
मेरो ब्ल्गले भर्खरका महिनाहरूमा धेरै ध्यान लिएको छ र मान्छेहरू उनीहरूको टिप्पणीहरूमा अत्यधिक दयालु छन्। व्यक्तिहरूले मलाई बधाई दिन वा मलाई धन्यवाद दिन समय निकाल्छन् भन्ने तथ्य अति उत्तम छ। यो वास्तव मा मलाई एकल पोष्टमा अधिक प्रयास गर्न को लागी ड्राइव गर्दछ। मैले ब्लग सुरू गरेदेखि केही महान टिप्पणीहरू गरेको थिएँ, तर मैले तपाईंलाई यो पत्र साझा गर्नुपर्‍यो। यो बिल्कुल मेरो दिन बनायो! यो ब्लगमा कत्ति प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने प्रमाण पनि हो। यो नोट हुनु अघि, मलाई कहिले पनि थाहा थिएन कि मिच पाठक हो ... उनको नोट जाँच गर्नुहोस्:
म तपाईको ब्लगको लामो समयको पाठक र ग्राहक हुँ। म तपाईलाई एउटा ई-मेल शूट गर्न चाहान्छु तपाईलाई थाहा छ म के गर्दै छु।
मेरो र साथी, दुबै क्यानडाको मोन्ट्रियलको म्याकगिल विश्वविद्यालयका अण्डरग्रेड विद्यार्थीहरूले भर्खरै एउटा नयाँ अनलाइन ग्राहक समर्थन कम्पनी सुरू गरे। हामीले हाम्रो नयाँ कम्पनीको विकास गर्न तपाईंको ब्लगबाट धेरै शिक्षाहरू प्रयोग गर्‍यौं।
हाम्रो कम्पनी भनिन्छ ClixConnect र अनलाइन ग्राहक समर्थन प्रदान गर्न एक अत्यन्त नवीन सेवा प्रदान गर्दछ। हामी के गर्छौं मूल रूपमा मानिसका वेबसाइटहरूको लागि आउटसोर्स लाइभ कुराकानी सेवा प्रस्ताव गर्दछ (साना लाइभ च्याट बटनहरू प्रयोग गरेर जुन तपाईं वेबसाइटहरूमा देख्नुहुन्छ)। वेबसाइट मालिकहरूले च्याट सोधपुछको लागि प्रतिक्रिया दिन सक्छन् जब तिनीहरू उपलब्ध छन्, र जब ती उपलब्ध छैनन्, हाम्रो कल सेन्टरबाट कसैले तिनीहरूको तर्फबाट सोधपुछको जवाफ दिनेछ, २//24//7।।
त्यो आधा नवीनता हो। ClixConnect को भारी अभिनव अंश यो छ कि हामीसँग हाम्रो सफ्टवेयरमा एउटा नयाँ टेक्नोलोजी पनि छ जसले ग्राहकहरुका लागि स्वचालित च्याट सिफारिसहरुलाई सक्षम गर्दछ, उनीहरूले देखेका उत्पादनको आधारमा। त्यसोभए कसैले वेबसाइटमा रातो टी-शर्ट हेरिरहेको छ भन्नुहोस्, एक स्वचालित च्याट विन्डो उनीहरूलाई नीलो पेन्टको प्यान्ट सिफारिस गर्न देखा पर्न सक्छ।
हामीले यसको योजना बनाउन6महिना बितायौं, र क्यानाडा, अमेरिका, रोमानिया र पाकिस्तानमा काम गर्नका लागि यसलाई आरम्भ गर्‍यौं।
म भर्खरै तपाईंलाई थाहा दिन चाहान्छु कि अन्तर्दृष्टि अन Martech Zone हामीलाई वास्तवमै हामी आज जहाँ छौं त्यहाँ पुग्न मद्दत गरेको छ, र हामी यसको प्रामाणिक कदर गर्दछौं।
धन्यवाद फेरि डगलस!
म्याकगिल विश्वविद्यालय बीकम २०० 2008
म साँच्चिकै चापलुसी छु! कस्तो अचम्मको चिठी। त्यो नोट पढ्नु भनेको मेरो लागि कत्ति थियो भनेर म भन्न सक्दिन। को साथ शुभकामना क्लिक्सकनेक्ट, मिच! म तपाईंको अनुप्रयोग जाँच्न जाँदैछु र तपाईंलाई मद्दत गर्ने सामग्री ल्याउन प्रयास गर्न जारी राख्छु!
मई 18, 2007 मा 9: 06 एएम
त्यो धेरै राम्रो छ, विशेष गरी एक विद्यार्थीबाट आउँदैछ। 18 महिना अघि मेरो एक कर्मचारी युरोप मा स्नातक स्कूल गए। उहाँले4हप्ता अघि भ्रमण गर्नुभयो र मलाई यहाँ काममा उहाँसँग साझेदारी गरेको PR र रणनीतिक व्यापार विधिहरूले उहाँलाई आफ्ना साथीहरू बीच एक शक्तिशाली, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिएको बताउनुभयो। त्यतिबेला उनलाई केही थाहा थिएन ।
म गहिरो उत्प्रेरित भएँ किनभने उहाँ एक असल केटा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो जीवनमा धेरै महान कामहरू गर्नुहुनेछ।
म पक्का छु कि त्यहाँ मिच जस्तै अरू धेरै छन् जो तपाईंको कामबाट सशक्त भएका छन्।
मई 18, 2007 मा 9: 28 एएम
धन्यवाद नील... यस्ता टिप्पणीहरू र पत्रहरू पक्कै पनि कुनै बोनस भन्दा बढी प्रेरणादायी छन्। यो पढेर साँच्चै राम्रो लाग्यो।
मेरो धेरैजसो ब्लग टिप्पणीहरूमा बनेको छ, त्यसैले मलाई विश्वास छ कि यो एउटा नोट हो जुन हामी सबैले राम्रो महसुस गर्न सक्छौं!
मई 19, 2007 मा 6: 34 एएम
मैले टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नबाट प्राप्त गरेको अन्तरक्रिया मेरो ब्लग लेख्ने सबैभन्दा इनामदायी भाग हो, र यसले मलाई राम्रो र राम्रो सामग्री तर्फ प्रयास गर्न मद्दत गर्दछ।
यो एक उत्कृष्ट कथा डग हो, र तिनीहरूले उत्पादन गरेको उत्पादन एक शानदार विचार हो, म भविष्यमा यसलाई प्रयोग गर्ने बारे सोच्न सक्छु।
मैले पक्कै पनि मेरो ब्लगमा तपाइँका धेरै सिफारिसहरू प्रयोग गरेको छु र अब फीडबर्नरमा 200 पाठकहरू (केही महिना पछि) नजिक छु, र यो आंशिक रूपमा तपाइँको कारण हो।
राम्रो काम गरीरह्नु,
मई 19, 2007 मा 9: 27 एएम
ओपल: शाकाहारी आमा
मई 21, 2007 मा 6: 34 एएम
मलाई थाहा छ यसले तपाईंलाई अद्भुत महसुस गराएको छ! त्यस्ता टिप्पणीहरूले तपाईंलाई सधैं विशेष महसुस गराउँदछ।
मसँग मेरो ब्लगमा लुकाउनेहरूको ठूलो मात्रा छ तिनीहरूमध्ये धेरैले मलाई समय समयमा इमेल पठाउँछन् र कहिलेकाहीँ तिनीहरू बाहिर आउँछन् र
"बोल्नुहोस्" कहिलेकाहीँ तिनीहरूका टिप्पणीहरूले मलाई मेरा नियमित पाठकहरूका टिप्पणीहरू भन्दा बढी प्रभाव पार्छ किनभने यो पूर्ण रूपमा अप्रत्याशित थियो। 🙂
मैले भर्खर बीस मिनेट अघि तपाईको वेबसाइट पत्ता लगाएको थिएँ। मैले तपाईका केही पोष्टहरू पहिले नै पढेको छु र मैले तपाईलाई बुकमार्क/लिंक गरेको छु ताकि मसँग धेरै समय हुँदा म फिर्ता आउन सक्छु।
म मेरो ब्लगलाई अर्को स्तरमा लैजाने बारे गम्भीरताका साथ सोचिरहेको छु र वेबसाइटहरूबाट प्राप्त जानकारी, जस्तै तपाइँको, पक्कै पनि मेरो सपनाहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न मद्दत गर्न गइरहेको छु।
म दुई बर्ष भन्दा बढि ब्लग गर्दै छु, यद्यपि, मेरा लक्ष्यहरू, विगत केही महिनाहरूमा परिवर्तन हुँदैछन्।
मई 21, 2007 मा 6: 46 एएम
धन्यवाद Vegan आमा! म तपाईंको साइट पनि जाँच गर्नेछु। म शाकाहारी होइन, तर यसले लिने समर्पणको लागि मसँग अविश्वसनीय सम्मान छ। र पक्कै पनि तपाईं आमा हुनुहुन्छ, वरपरको सबैभन्दा कठिन काम! म एक्लो बुबा हुँ त्यसैले म दुवै टोपी लगाउन प्रयास गर्छु (र असफल)।
मलाई थाहा दिनुहोस् यदि म तपाईंलाई केहि मद्दत गर्न सक्छु!
मई 21, 2007 मा 7: 06 एएम
म पक्कै पनि प्रश्न सोध्ने छु। यस बिन्दुमा मलाई के सोध्ने थाहा छैन! मार्केटिङ, मेरो ब्लगको लागि, अझै मेरो लागि धेरै नयाँ छ। सुन्दै, पढ्दै र सिक्दै छु ।
म एकल आमा हुँ र हो मलाई थाहा छ तपाईले दुबै टोपी लगाउने प्रयास गर्नुको अर्थ के हो। 🙂